राष्ट्रिय मिडियाहरूको ध्यान धनुषा —३ मा केन्द्रित
प्रफुल राज घिमिरे
मंसिर ४ गते,जनकपुरधाम ।
राष्ट्रिय मिडियाहरूको मुख्य ध्यान यतिबेला धनुषा ३ मा केन्द्रित देखिएको छ । राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित–प्रसारित कुनै मिडिया छैनन्, जसले नियमित रूपमा धनुषा ३ को चुनावी गतिविधि उल्लेख गरेका नहुन् । यो निर्वाचन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मिडियाहरूले यति धेरै प्राथमिकता दिनुको कारण के होला ? यो प्रश्नको उत्तरलाई हामी यहाँका मतदाता, बुद्धिजीवी तथा पत्रकार वर्गले गम्भीरतापूर्वक पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यो निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी परिणामले मुलुकको भावी राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्छ । नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव जित्नुभयो भने मुलुकको राजनीति एक ढंगले अघि बढ्छ, उहाँले चुनाव जित्नु भएन भने अर्को ढंगले अघि बढ्छ ।
निधिजीले चुनाव जित्दा के हुन्छ ? नजित्दा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर म संक्षिप्त रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्छु । संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब मंसिर २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ ।
संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही समस्या छन् । मधेसी जनताका कतिपय माग संविधानमा समेटिन बाँकी छन् । संविधान संशोधनको माध्यमबाट मधेसी जनताका माग सम्बोधन गर्ने वाचाकवुल नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई यो वाचाकवुल गर्ने अवस्थामा ल्याउनु भएको निधिजीले नै हो । एकातिर वाम गठबन्धनले संविधान संशोधनका नाममा कमा फुलिस्टप पनि परिवर्तन नगर्ने अडान लिएको छ भने अर्का्तिर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संविधान संशोधनद्वारा मधेसी जनताका माग सम्बोधन गर्ने वाचाकवुल गरेको छ । यो वाचाकवुलका स्रोत निधिजीले चुनाव जित्नु भएन भने संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा पर्नसक्छ ।
तराई मधेसमा फेरि द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । फेरि आन्दोलन गर्नुपर्न अवस्था आउँछ । पटक पटकका मधेस आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । मधेस आन्दोलनअघिको जनकपुरको सामाजिक सद्भाव र अहिलेको सामाजिक सद्भावलाई तुलना गरेर हेरे पनि हुन्छ । संविधानमा मधेसी जनताका आकांक्षा समेट्ने काम निधिजीबाट भन्दा मधेसी दलबाट उम्मेदवार बनेका राजेन्द्र महतोबाट प्रभावकारी रूपमा हुन्छ कि ? भन्ने तर्क पनि यहाँ उठ्ने नगरेका होइनन् । तर संविधान निर्माण हुँदै गर्दा मधेसी जनताका आकांक्षा समेट्ने सन्दर्भमा निधिजीले कस्तो भूमिका खेल्नु भएको थियो ? र, महतोजीले कस्तो भूमिका खेल्नुभएको थियो ? भन्ने सन्दर्भमा पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अन्तिम ड्राफ्ट हुँदै गर्दा २०७२ भदौ १६ गते निधिजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सात पेज लामो १४ बुँदे सुझाव पत्र पेस गर्नुभएको थियो । मधेसी समुदायका आकांक्षालाई समेटेर पेस गरिएको त्यो सुझावपत्र पढ्ने हो भने पनि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । निधिजीले दिएका ती सुझावमध्ये करिब दुई तिहाइ संविधानमा समेटिएका छन् । बाँकी एक तिहाइ समेट्नका लागि निधिजीले संविधान संशोधनको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । तर निधिजीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सर्लाहीबाट यहाँ आउनु भएका महतोजीले संविधान निर्माणका क्रममा मधेसी जनताका आकांक्षा यी यी हुन् भनेर एउटा पनि सुझाव दिनुभएको छैन । जनता भड्काएर मधेसलाई मुठभेडमा लैजाने, रक्तपात मच्चाउनेबाहेक उहाँको नियत देखिएन । मधेसी जनताका सम्पूर्ण आकांक्षा संविधानमा समेटिए भने आफ्नो राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुने डर उहाँलाई छ । जसरी मुलुकमा गरिबी उन्मूलन भयो भने आफ्नो राजनीतिक गर्ने आधार सकिने दृष्टिकोणका साथ कम्युनिस्टहरू जनतालाई गरिबीमै राख्न चाहन्छन्, त्यसरी नै मधेसी जनताका आकांक्षा सम्बोधन भयो भने आफ्नो राजनीति गर्ने आधार समाप्त हुने डर महतोजीलाई छ । निधिजीलाई संसद्मा पुग्नबाट रोक्न सकियो भने संविधान संशोधन रोकिने र मधेसी समास्या सधंै यथावत् रही आफूलाई राजनीति गर्न अनुकूल हुने ठम्याइँमा महतोजी हुनुहुन्छ । जनकपुरमा क्रियाशील मिडियाका साथीहरूले यो यथार्थतालाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरिदिनुभयो भने मधेसप्रति ठूलो न्याय हुनेछ ।
मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न निधिजी काविल कि ? महतोजी काविल भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने ताकत भएका पत्राकार तथा बुद्धिजीवीहरूको कमी जनकपुरमा छैन । तर उहाँहरू यो मामिलामा अझै गम्भीर हुनु जरुरी देखेको छु । यहाँ अफवाह फैलाइँदैछ कि निधि गृहमन्त्री हुँदा सप्तरीको तिलाठीमा गोली चल्दा तीनजना मारिए, मधेसी भएर मधेसीका छोराछोरीमाथि गोली चलाइयो । उक्त गोलीकाण्ड कुन पृष्ठभूमिमा कसरी भएको हो ? भन्ने कुराको विश्लेषण गरिएन भने निधिजीमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । संविधान संशोधनलाई बिथोल्ने नियतका साथ एमालेले मेची–काली अभियानका नाममा सिधासाधा पहाडिया युवाहरूलाई दारु खुवाएर जुलुसमा सामेल गरेको थियो । मधेसीहरूले देश टुक्र्याउँदै छन्, रोक्न जाउँ भन्दै एकातिर एमालेले टोपी लगाएको ठूलो हिस्सा सप्तरीको तिलाठीमा उतारेको थियो भने अर्का्तिर मधेसी समुदायका युवा पनि आक्रोशित रूपमा प्रतिकारको तयारीमा थिए । एमाले र मधेसी दलको अभिष्ट थियो– ‘दुई समुदायका युवा दस्ताबीच भिडन्त गराउने ।’ यदि त्यो भिडन्त नरोकिएको भए आज मुलुकको हालत के हुन्थ्यो होला ? मुलुकभरि आगो बल्थ्यो, गृहयुद्धको चपेटामा मुलुक फस्थ्यो । निधिजीले भिडन्त रोक्न निर्देशन दिनुभयो । तर प्रहरीबाट केही ज्यादती भयो । गृहमन्त्रीको आदेशविना गोली चलेका कारण त्यो घटनाका दोषीहरू कारबाहीमा परिसकेका छन् । घटनालगत्तै निधिजी तत्काल घटनास्थल पुग्नुभयो । मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुभयो, मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भयो, घाइतेहरूलाई निःशुल्क उचित उपचारको व्यवस्था गराउनुभयो । कुनै घटनाको यतिछिटो सम्बोधन भएको रेकर्ड हाम्रो मुलुकमा छ ? छैन । यदि त्यतिबेला निधिजीबाहेक अर्को गृहमन्त्री हुन्थ्यो भने मधेसी–पहाडीबीच मारामार हुने निश्चित जस्तै थियो ।
मधेसका समस्या समाधानका सन्दर्भमा निधिजीले जति भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र अब जति भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ, त्यसको दाँजोमा महतोजी निकै पछाडि हुनुहुन्छ । निधिजी मधेसको मात्रै नेता होइन भन्ने कुरा पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँप्रति हिमाल पहाडका कुनाकन्दराका जनता पनि आशावादी छन् । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि समकालीन नेताहरूको तुलनामा निधिजीको भूमिका सबैभन्दा अग्रणी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा नेपाली कांग्रेसलाई ल्याउन र एमालेका नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्न निधिजीले धेरै नै ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्दै थिए– ‘यतिबेला गणतन्त्रमा जान खोज्नु र बयलगाढामा चढेर अमेरिका प्रस्थान गर्नु उस्तै उस्तै हो ।’ तर निधिजीले सबैलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । सिंगो मुलुकको मार्ग्चित्र बनाएर दिशानिर्देश गर्ने ताकत राख्ने निधिजी उम्मेदवार भएकै कारण धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को निर्वाचनले मुलुकभरि नै सर्वा्धिक महत्व पाएको हो । निधिजीलाई जितायौं भने सिंगो मुुलुकले हामी जनकपुरका जनताप्रति गर्व गर्दछ, यदि निधिजीलाई हरायौं भने सिंगो देशका जनाताले हामीलाई सराप्ने छन् । जनकपुर भनेको पौराणिककालदेखि नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा पनि नेपाललाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेको ठाउँ हो । जनकपुरको यो गरिमा कायम रहन पनि निधिजीले चुनाव जित्नै पर्छ ।
जनकपुर क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि निधिजीबाट बढी काम होला कि महतोजीबाट ? भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ । यो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि निधिजीले अहिलेसम्म के के काम गर्नुभयो ? र, भावी योजनाहरू के के छन् ? भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिरहनु म सान्दर्भिक देख्दिनँ । ४० किलोमिटर लामो जटही–जनकपुर ढल्केवर सडक, ९९ किलोमिटर लामो परिक्रमा सडकलगायतका थुप्रै आयोजनाहरू तपाई हाम्रै आँखा अगाडि छन् । उहाँसँग चुनाव लड्न आउनु भएका महतोजी नयाँ भएका कारण यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा तपाईले के के काम गर्नुभयो ? भनेर प्रश्न सोध्नु अप्रसांगिक हुन्छ । तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीमा तपाईले विकास निर्मणका लागि के के काम गर्नुभयो ? भनेर सोध्न जरुरी छ । किनकि निधिजीभन्दा उहाँ लामो अवधि मन्त्री बन्नुभएको छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएको छ । यदि उहाँले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको भए सर्लाहीबाट भागेर जनकपुर आउनुपर्ने थिएन । पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि विकासका नाममा सिन्को नभाँचेका कारण सर्लाहीका जनताबाट लखेटिएर महतोजी जनकपुर आउनु भएको यथार्थतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।